Optics Window - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 11 Products for Optics Window)
Muenzaniso Nha.: RP-SW
Sapphire Windows inogadzirwa kubva kune imwe chete yekristaro yesafiri AI2O3, mukana wayo wakanyanya kuomarara kwepamusoro, kupisa kwakanyanya kupisa, kwakanyanya dielectric kuramba uye kuramba kune akajairika makemikari acids uye alkalis. Magadzirirwo: Chinyorwa: Sapphire AI2O3 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita...
AR yakavharwa Calcium Fluoride Windows
Calcium Fluoride ine yakakwira kufambisa kubva ku200nm kusvika 7 μ m. Yayo yakaderera kutora uye yakanyanya kukuvara chikumbaridzo chinoita kuti ive inozivikanwa sarudzo yeeximimer laser optics. AR Kuchengeta UV, Visible, uye NIR kunowanikwa. Magadzirirwo: Zvinyorwa: Calcium Fluoride Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita...
AR Coated Optical girazi B270 windows
Optical windows anoshandiswa kuitira kuchengetedza zvisina kusimba opareti zvinhu mukati memidziyo, ivo vanogamuchirwa kutsaura miviri yemuviri nharaunda vachibvumira mwenje kuti upfuure. Tinogona kupa B270 hwindo muhukuru hwakasiyana, ukobvu uye chimiro. AR Yakaputirwa UV, Inoonekwa, uye NIR inowanikwa. Magadzirirwo:...
Uncoated Calcium Fluoride Windows
Calcium fluoride ine hutachiona hwepamusoro kubva ku200nm kusvika 7 μ m. Yayo yakaderera kutora uye yakanyanya kukuvara chikumbaridzo chinoita kuti ive inozivikanwa sarudzo yeeximimer laser optics. Magadzirirwo: Zvinyorwa: Calcium Fluoride (CaF2) Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba...
Optics Window Optic Windows Optical Window Optics Hwindo Optic Hwindo Optics Led Sapphire Optical Window Optics Dhizaini